I-fiber optic Cable clamp kunye ne-Bracket abavelisi kunye nababoneleli - China Ifayibha ye-Fiber Optic ye-Clamp kunye ne-Bracket Factory
Umgca weJera ubonelela ngesisombululo esipheleleyo seemveliso zokuhanjiswa kwentambo ye-fiber optic kulwakhiwo lwenethiwekhi lwe-FTTx. Sibonelela ngeziqhoboshi ezahlukeneyo kunye nezibiyeli ze-ADSS okanye ukulahla izisombululo zokufaka intambo.
Cable uqinisa kunye isibiyeli kubaluleke kakhulu ngexesha iiprojekthi zonxibelelwano. IJera izinikele ekuphuhliseni nasekuveliseni iimveliso ezizinzileyo, ezingenaxabiso kunye nezithembekileyo ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo kubathengi. Izinto eziphambili zokubamba kunye neebakaki zii-UV ezinganyangekiyo zi-thermoplastic, i-galvanized iron, i-aluminium alloy, i-stainless steel.
Uqinisa kunye nesibiyeli kubandakanya:
1) Izikhonkwane ze-anchor zeentambo ze-ADSS
2) Ukurhoxiswa kwamasango eentambo ze-ADSS
3) Izikhonkwane ze-Anchor zeentambo-8
4) Ukurhoxiswa kwamasango ekubambeni kweentambo-8
5) Ulahla yamasango for iintambo FTTH
I-6) I-clamp ekhokelela ezantsi
7) Anchor kunye nokumiswa kwizibiyeli
Sinikezela abathengi bethu ngeemveliso ze-fiber optic ezizithembileyo ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo ngokufika ngexesha kunye nexabiso lokhuphiswano.
Zonke iindibano zentambo ziphumelele iimvavanyo zokuqina, amava okusebenza ngamaqondo obushushu ovavanyo, uvavanyo lobushushu ngebhayisikile, uvavanyo lokuguga, uvavanyo lokumelana nomhlwa njl.
Ngosuku ngalunye siphucula imveliso yethu yefayibha ye-fiber optic izixhobo zokumelana nemiceli mngeni emitsha yentengiso yehlabathi. I-OEM ikwafumaneka kuthi, nceda usithumelele iisampulu okanye uqwalaselo olunenkcukacha, sinokubala iindleko ngexesha elifutshane kuwe.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ifayibha ye-Optic Cable Slack Storage, i-Yk-610-L
Isibiyeli esingaphezulu sePole, Ykp-32
Umzobo 8 I-Anchor Clamp Clamp, Pa-10-320
I-Adss Clamp Tension Bracket, Ykn
Isibiyeli esingaphezulu soxinzelelo, Ykr-01
Ukurhoxiswa uqinisa isibiyeli, Js-1500
I-Adss Cable Suspension Bracket, Ykp-02
Fibre Cable Ukurhoxiswa isibiyeli, Ykp-01
Ukurhoxiswa Hook, Yk-06
I-Ftth Cable Hook, Yk-05
I-Ftth Drop Clamp Hook, Yk-04
I-Ftth Drop Clamp Hook, Yk-02